ShweMinThar: Low Back Pain ခါးနာ သက်သာစေရန်
၁။ ဆရာ ဒီရက်ပိုင်း ၅ ရက်လောက်ရှိပြီ မနက်ဆို အိပ်ယာထခါနီး ခါးနာနေတာ။ ဘာဖြစ်တာလဲ စဉ်းစားနေမိတာ။ ကျန်တဲ့အချိန်တော့ မနာပါဘူးဆရာ။ အိပ်ယာထခါနီးအချိန်တခုပါပဲ။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော် အသက် ၃၃ ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော် ခါးနာနေတာ ၃ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ဆရာဝန်ရော ဆေးခန်းရော စုံနေပါပြီ။ သက်သာလိုက်မသက်သာလိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ခါးနာနေတာ ကျောက်ကပ် ဆီးစတာတွေ ကြောင့်ပါလားဆိုပြီး ဆရာဝန်တွေ ဆေးခန်းတွေမှာ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်တော်တော်များများက ကျောက်ကပ်နဲ့ ဆီးကိုမစစ်ပေးဘူးဆရာ။ ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာ လမ်းပြပေးပါဆရာ။ ကျွန်တော် အစိုးရိမ်လွန်တာလို့ပဲ ဝန်ခံပါရစေဆရာ။ ခါးနာလုံးလုံးပျောက်သွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပမလဲဆရာ။ အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပေးပါ ဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပဌမမေးခွန်းမေးသူက အိပ်ယာထခါနီးအချိန်တခုပါပဲနာတာဆို အိပ်ယာထဲကနေမထပဲသာ အလုပ်လုပ်လို့ပြောမိမှာ။ ဆေးခန်းမှာ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့လူနာတွေကို အဲလိုပြောနေကျ။ ရင်ကြပ်တယ်ဆိုရင် အင်္ကျီချောင်တာဝတ်။ ချောင်းဆိုးရင် တံတားပေါ်ကလျှောက်။ အဲတာတော့ ရှင်းပြရတတ်တယ်။ ချောင်းကသွားမကောင်းလို့ ချောင်းပေါ်တံတားကနေသွားလို့။
ဒုတိယမေးခွန်းမှာ (ဆိုးရိမ်) လို့ရေးတာကိုပြင်ထားပါတယ်။
ခါးရိုးမကြီးဆိုတာ အရိုးလေးတွေ တခုနဲ့တခု ထပ်နေတယ်။ အရိုးတခုနဲ့တခုကြားမှာ အရိုးနုပြားလေးတွေရှိတယ်။ အရိုးလောက်မသန်မာလို့ အသက်ကြီးသူတွေ အားမကောင်းတော့ဘူး။ ခါးကိုထိခိုက်မိရင် စုတ်ပြဲသွားနိုင်တယ်။ ကျွံသွားနိုင်တယ်။ နောက်ကိုကျွံရင် သူ့နောက်က အာရုံကြောမကြီးကို သွားဖိစေနိုင်တယ်။ ခါးဆစ်အရိုးနု (အရွတ်) နောက်ဖက်ဆီကျွံတာကို Herniated Disc (Prolapsed disc) ခေါ်တယ်။ အလွန်နာမယ်။ အဲတာကနေ အာရုံကြောတွေကို ဖိနေလို့ နာနေတာ။ စာထဲပါတာတွေလိုက်နာရင် သက်သာနေမယ်။ ပျောက်ဘို့ကတော့ ခွဲရနိုင်တယ်။ ဆောရီး။
လူတိုင်းလိုလို တချိန်မှာဖြစ်ဘူးကြတယ်။ သူ့ဖါသူ ပျောက်သွားတာများတယ်။ မပျောက်ဘူးဆိုရင် ထိရောက်တဲ့ ကုသနည်းတွေ ရှိတယ်။ ထုံပြင်းပြင်းနာတာနဲ့ ထိုးတာခံရသလိုနာတယ်။ ခါးမတ်အောင် နေလို့မရဖြစ်တယ်။ အားကစားလုပ်ရင်း၊ အလုပ်လုပ်ရင်း ရုတ်တရက်နာလာတာရှိတယ်။ ၃ ရက်နေလို့မှ မပျောက်ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ ၃ လနေလို့မှ မပျောက်ရင် နာတာရှည်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ အသက် ၃ဝ ကျော်လောက်မှာ အများဆုံး စဖြစ်ဘူးတတ်တယ်။ အသက်ကြီးလာလေလေ ဖြစ်နိုင်ခြေများလေလေ။ ကိုယ်အလေးချိန်ပိုလာတာ၊ လှုပ်ရှားမှု နည်းလာတာတွေကြောင့် ဖြစ်မယ်။ ဆီးသွား-ဝမ်းသွားတာအထိ ထိခိုက်လာရင်၊ အောက်ပိုင်းမှာ အားနည်းလာရင်၊ ဖျားလာရင်၊ ချောင်းဆိုး လိုက်ချိန်မှာ ပိုနာတာဖြစ်ရင်၊ ဆီးသွားလို့ပိုနာရင် အရေးကြီးတာဖြစ်နိုင်တယ်။
အလေးအပင်မရာကနေဖြစ်တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်းကနေဖြစ်တာမျိုးက ကြွက်သားနာတာ ခေါ်တယ်။
ခါးရိုးဆစ်က အရွတ်ရွေ့တာကို Sciatica ခေါ်တယ်။ (ဆိုင်ယားတစ်) အာရုံကြောတလျှောက် လိုက်နာမယ်။ တင်ပါး-ပေါင်-ခြေသလုံးအထိ နာမယ်။ အလုပ်လုပ်ရာမှာ အလေးမရတာ၊ ဆွဲရတာမျိုးတွေက ခါးကိုလိမ်သလိုလုပ်ရရင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ထိုင်လုပ်နေရတာ ကြာသူတွေလဲ နာနိုင်တယ်။ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ကျောပိုးအိတ်၊ လက်ဆွဲအိတ်တွေကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အားကစားနည်းတွေကနေလဲ နာတယ်။ Spinal stenosis ခါးရိုးနေရာကျဉ်းတဲ့ရောဂါမျိုးကနေလဲ အာရုံကြောကိုဖိစေပြီး နာစေနိုင်တယ်။ Spondylitis ရောဂါကနေလဲ နာနိုင်တယ်။ Fibromyalgia ရောဂါကနေလဲ နာနိုင်တယ်။ ခါးနာတာသေခြာအောင် X-rays, CT or MRI scans တွေနဲ့ခွဲခြားရတယ်။
(၁) အနေအထိုင် ပုံစံ၊ ခါးမတ်ထိုင်ပါ။ ခါးအမှီပါစေရမယ်။ ပခုံးပါ နားစရာရှိသင့်တယ်။ ခြေထောက်ကလဲ နားစေနိုင်ရမယ်။ မတ်တပ်ရပ်ရင် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ခြေနှစ်ဖက်လုံးပေါ်မှာ မျှနေပါစေ။
(၂) ကြွက်သားဒဏ်ကြောင့်နာတာမျိုးက သူ့အလိုလိုကောင်းမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ Heating pad or warm baths အပူကပ်ပေးတာ လုပ်နိုင်တယ်။
(၃) ခါးနာတာကို နားခိုင်းမလား။ ခါးနာသူတွေက အိပ်ရာထဲကမထချင်ကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ Muscle strain ကြောင့်သာဆိုရင် လုပ်နေကြအလုပ်ကို စောနိုင်သမျှစောပြီး ပြန်လုပ်သင့်တယ်။ အိပ်ရာထဲမှာ ၁-၂ ရက် နေသူတွေက ခါးနာပိုဆိုးစေနိုင်တယ်။
(၄) ယောဂနည်းကို ၃ လနေလို့မှ မသက်သာသေးသူတွေ ၃ လ လုပ်သင့်တယ်။
Sacralization မွေးရာပါခါးဆစ်ရောဂါတမျိုးရှိတယ်။ လူဦးရေရဲ့ ၃့၅% မှာ ခါးရိုးဆစ်နံပါတ် (၅) ရဲ့ ဘေးဘက် ထွက်နေတဲ့အရိုးနဲ့ အောက်က (ဆေခရမ်) တင်ပါးရိုး သွားပြီးတွယ်ဆက်နေတာမျိုးရှိကြတယ်။ တဖက်တည်းရော နှစ်ဖက်လုံးပါအဲလိုဖြစ်နေနိုင်တယ်။ တချို့မှာ ခါးအောက်ပိုင်းနာတာကိုခံစားရမယ်။ တချို့က ဘာမှ မခံစားရဘူး။
အတိအကျ မဖြစ်ရပါဘူးလို့ အာမခံနိုင်တာ မရှိပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ၊ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ပါ။ မ,စရာရှိရင် ခြေနဲ့သာ မပါ။ ခါးနဲ့ မ မပါနဲ့။ အလုပ်လုပ်ရာ အနေအထိုင်မှာ ခါးကို သက်တောင့်သက်သာ အမြဲရှိပါစေ။ ခေါင်းအုံးမြင့်တာ မသင့်ပါ။ အိပ်ရာခင်းမာမာမှာသာ လဲလျောင်းပါ၊ အိပ်ပါ။ မွေ့ယာ မသင့်ပါ။ ကြိုးကုတင်၊ (ဒရင်းမ်ဘက်)၊ စပရင်ကုတင် မသင့်ပါ။ ထိုင်ရင် ပေါင်ကအောက်ခံမှာထိနေ၊ ကျောက နောက်မှီနဲ့ထိနေရမယ်။ ဖင်ထိုင်ခုံမှာ မထိုင်ပါနဲ့။ ကြမ်းပေါ် တင်ပါးချ မထိုင်ပါနဲ့။ ပက်လက်ကုလားထိုင်၊ (ဆိုဖါ) အိတာမှာမထိုင်ပါနဲ့။ မျက်နှာသစ်၊ လက်ဆေးပန်းကန်ဆေးရာမှာ ကြွေခွက်၊ စားပွဲ၊ ခုံ ကိုယ်နဲ့အနေတော်ပါစေ။ နည်းနည်းလေးမှ မကုံးရစေပါနဲ့။ ရေအိမ်သာ ဒူးကို ၉ဝ ဒီဂရီ ကွေးနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားသုံးပါ။
1. Cervical Spondylosis လည်ပင်း ကျီးပေါင်းတက်နေပါတယ်http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/cervical-spondylosis.html
2. Low Back Pain ခါးနာ သက်သာစေရန်http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/low-back-pain.html
3. Lumbar spondylosis ခါးရိုးကျီးပေါင်းတက်ခြင်းhttp://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/lumbar-spondylosis.html
4. Mid Back Pain ကျောလယ်ကနာခြင်းhttp://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/mid-back-pain.html
5. Sciatica (1) အကြောနာ (၁)http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sciatica.html
6. Sciatica (2) အကြောနာ (၂)http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sciatica-2.html
Posted by Alex Aung at 5:58 PM
လက်​ဖက်​နဲ့ဖန်​တီး​သော စားစရာ (၃)မျိုး
ခေါင်းလောင်း ဘာကြောင့် ထိုးရတယ်
ခုလိုဆိုတော့ တရားရဖို့ လွယ်သားပဲ
ကျွန်​လုပ်​သားများထုတ်​လုပ်​သည့်​ ပင်​လယ်​စာ (အပို...
မန်းကျည်းဝက်​သား​ကြော်​ - အပ်​မှိုချိုစပ်​ - ကြက...